i-aluminium 7075 CNC anodizing CNC machining China Manufacturer
Incazelo:Ukuzisika kwe-Aluminium,Ukusika kwe-Axis Cnc,I-Cnc yokusika i-Aluminium
Home > Imikhiqizo > CNC Aluminium Ukusika > i-aluminium 7075 CNC anodizing CNC machining
I-Aluminium 7075 : Leli banga elidumile ngemuva kwe-6061. I- Aluminium 7075 yaziwa kahle ngokukhathala kwayo okuhle kakhulu.
Leli banga alishintshi kalula futhi lingenye yokuhlukahluka okubiza kakhulu okutholakalayo.
Ngakho-ke, isetshenziswa kakhulu kwizakhi ezinzima, ezinjengamaphiko endiza, ne-fuselages, izinto zamabhayisekili, imishini yokukhuphuka kwamatshe.
Ukusikwa kwe-aluminium cnc ngokunemba okuphezulu futhi okudumile emhlabeni wonke eminyakeni eminingi.
Inkonzo yokusika ye-CNC kufaka phakathi i-aluminium cusotmized cnc, i-aluminium harware cnc, ukusikwa kwekhabhoni ye-cnc kanye neminye insizakalo ehlobene, enjenge-logo nokuhlangana.
Qeda: Zonke izinhlobo zokwelashwa komhlaba ziyatholakala njengokufaka i-chrome plating, i-zinc plating, i-nick plating, i-powder coating, i-e-coating, i-dipating coating, i-polishing polishing, njll.
Inkonzo: Izinsizakalo ze-OEM & ODM ne-CNC, Hardwares, izingxenye ze- Aluminium, ukusika i-Cnc Aluminium, i-Cnc ukusika i-Aluminium, ukusikwa kwe-3 Axis Cnc, 4 Axis Cnc Cutting
I-Hobbycarbon CNC LIMITEDis ingumkhiqizi we-OEM okhethekile emikhiqizweni yeCarbon fiber, Carbon Fibre CNC Cutting, Aluminium Fasteners, Titanium Fasteners, ezinye izinsimbi zama-drones nezimoto. Ngezidingo ezandayo zebhizinisi lomkhiqizo, sandisa ibhizinisi lethu ekuqunjweni kwe-Aluminium CNC, sazinikela ekuhlinzekeni insizakalo ephelele kubathengi.
Inkonzo yokusika insiza ye-laser uk Xhumana Nanje
I-CNC isike izingcezu zesikebhe ze-aluminium ezithengiswayo Xhumana Nanje
Ikhamera ye-aluminium yekhamera ye-CNC ye-gimbal Xhumana Nanje
I-CNC aluminium yokugoqa i-quadcopter Xhumana Nanje
I-aluminium gimbal eyenziwe ngokwezifiso ye-hexacopter Xhumana Nanje
CNC aluminium hobby isikhunta intaba FPV luhlaka Xhumana Nanje
Okwenziwe ngomshini we-aluminium ngokwezifiso ezingejwayelekile Xhumana Nanje
Isidingo esiphakeme sensimbi ingxenye ye-aluminium yensimbi Xhumana Nanje
Ukuzisika kwe-Aluminium Ukusika kwe-Axis Cnc I-Cnc yokusika i-Aluminium Ukusikwa kwe-Aluminium Cnc Izinsika ze-M3 Aluminium FPV Izinsika ze-Aluminium Ukufakwa kwe-Aluminium Spacer Ukusika i-Diy CNC Aluminium
Ukuzisika kwe-Aluminium Ukusika kwe-Axis Cnc I-Cnc yokusika i-Aluminium Ukusikwa kwe-Aluminium Cnc Izinsika ze-M3 Aluminium